बैंकहरूको नाफा ४५ अर्ब पुग्यो, कुनले कति कमाए ? - Nepal's Digital News Paper
बैंकहरूको नाफा ४५ अर्ब पुग्यो, कुनले कति कमाए ?
० नौ महिनामा नाफा २० प्रतिशतले बढ्यो ।
० सरकारी स्वामित्वकै बैंक बढी नाफामा, जसले कमायो साढे ३ अर्ब ।
० २६.३१ खर्ब निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहमा भने चाप ।
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको नाफा चालू वर्षको तेस्रो त्रैमास (नौ महिना) मा २० प्रतिशतले बढेर करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष समीक्षा अवधिमा नाफा ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
नाफा बढे पनि सरोकारवालाले भने यसमा चित्त बुझाउने गरेका छैनन् । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा (एनएफआरएस) अनुसार विवरण प्रकाशन गर्दा नाफा धेरै देखिएको बैंकरले तर्क गर्दै आएका छन् । यद्यपि, समग्र अर्थतन्त्रको विकास र मुद्रास्फीतिसँगै बैंकहरूले गर्ने नाफा बढ्नु स्वाभाविक भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंक २८ वटा छन् । यीमध्ये सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ४९ करोड नाफा कमाएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा उक्त बैंकले ३ अर्ब ८ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । तर, सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंक लिमिटेडको भने गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा नाफा साढे १२ प्रतिशत घटेको छ । गत आवमा तेस्रो त्रैमासको मुनाफा २ अर्ब ५६ करोड थियो । यसपटक भने २ अर्ब २४ करोड मात्र नाफा कमाएको छ । नेपाल बैंकका अनुसार ३–४ महिनादेखि सीईओपद रिक्त रहेको र व्यवस्थापन सोचेअनुरुप नभएकाले नाफा घटेको हो ।
बैंक अफ काठमाडौं, सेन्चुरी र सिभिलबैंकको नाफा अर्बपुग्न सकेको छैन । पछिल्लो नौ महिनामा यी बैंकको नाफा क्रमशः ३८ करोड ६८ लाख, ६१ करोड ६ लाख, ४९ करोड ३८ लाखरुपैयाँ छ । यी बाहेक २५ बैंकको नाफा अर्बभन्दा माथि पुगेको सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नबिल बैंकले गतवर्षको तुलनामा ३.१८ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेको छ । २८ वटै बैंकको रकमसँ गतुलना गर्दा भने यो धेरै नाफा कमाउनेमा दोस्रो स्थानमा छ । नबिलले ३ अर्ब १९ करोड रुपैया नाफा आर्जन गरेको छ । यसपछि क्रमशः नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ५७ करोड, एनआईसी एसिया बैंकले २ अर्ब २८ करोड, नेपाल बैंकले २अर्ब २५ करोड, लक्ष्मी बैंकले १अर्ब २ करोड ९६ लाख र जनता बैंकले १अर्ब २ करोड ३७ लाख नाफा कमाएका छन् ।
बैंक तथावित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै आएको छ । मुद्दती निक्षेपमा आकर्षण गर्न, चुनचाँदी, जन्मदिनमा केक दिने लगायत अफर दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अब तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न नपाउने प्रावधान ल्याइएको छ । हालसम्म मुद्दती निक्षेपलाई जोड दिएर लगानीको स्रोत जुटाएका बैंकलाई भने अब नाफा कमाउन थप चुनौती देखिने भएको छ ।
२६.३१ खर्बनिक्षेप संकलन
वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । बैंकहरूले सोहि अवधिमा रू २३ खर्ब ६७अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा भने चाप परेको बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । बैंकहरूले लगानी योग्य पुँजी जुटाउन पनि चर्को ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, यसलाई सीमित दायरामा ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरी साढे ११ प्रतिशतको दायरामा राख्न अनुरोधग¥यो । तर, बैंकहरूले यसैको आसपासमा रहेर निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा पनि कर्जाको ब्याजदरलाई दबाब प¥यो भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरेकाथिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६को तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुन बैंकले कति नाफा कमाए ? (रकम रु. हजारमा)